नि:शुल्क एन्टिभाइरस एपले नै चोर्छन् प्रयोगकर्ताहरूको व्यक्तिगत जानकारी ! - Technology Khabar
» ताजा समाचार » नि:शुल्क एन्टिभाइरस एपले नै चोर्छन् प्रयोगकर्ताहरूको व्यक्तिगत जानकारी !
नि:शुल्क एन्टिभाइरस एपले नै चोर्छन् प्रयोगकर्ताहरूको व्यक्तिगत जानकारी !
Technology Khabar २५ बैशाख २०७९, आईतवार
आफ्नो स्मार्टफोनलाई भाइरस वा मालवेयरबाट जोगाउन धेरै प्रयोगकर्ताहरूले प्ले स्टोरबाट नि:शुल्क उपलब्ध हुने एन्टि भाइरस डाउनलोड गर्छन्।
तर तपाईंको एन्ड्रोइड स्मार्टफोनलाई भाइरसबाट जोगाउनुको सट्टा, प्ले स्टोरमा उपलब्ध धेरै नि:शुल्क एन्टिभाइरसहरूले त्यसमा खतरनाक भाइरसहरू इन्जेक्ट गर्छन्, जसले तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी चोर्न सक्छ।
हालै एक प्रतिवेदनबाट यो खुलासा भएको हो। साइबरन्युजले ४० उच्च श्रेणीका डाउनलोड गरिएका क्लिनिङ र एन्ड्रोइड एन्टिभाइरस एपहरूको अध्ययन गर्यो र पत्ता लगायो कि यी एपहरू डेस्कटप संस्करणको रूपमा उच्च मापदण्डमा खरो उत्रन सक्दैनन्। दुबै संस्करणहरूको इन्स्टलहरू बीच पनि ठूलो भिन्नता छ।
गुगल प्ले स्टोरबाट सबैभन्दा धेरै डाउनलोड हुने एन्टि भाइरसको १० लाखभन्दा बढी अर्थात् १० लाख इन्स्टल छन्। एकै समयमा, एन्टिभाइरसको डेस्कटप संस्करणमा ९१ करोड ८० लाख इन्स्टलहरू छन्।
नि: शुल्क एन्टिभाइरस र क्लिनिङ्ग एपहरू खतरनाक छन्!
साइबरन्युजले आफ्नो ब्लग पोष्टमा सामान्य एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो डिभाइसलाई मालवेयर वा भाइरसबाट जोगाउन एन्टिभाइरस र क्लिनिङ एप इन्स्टल गर्ने गरेको बताएको छ। डिभाइसलाई सुरक्षित गर्नुको साथसाथै, यी एपहरूले डिभाइसको जङ्क फाइलहरू र क्यासहरू पनि खाली गर्छन् ताकि डिभाइस छिटो सञ्चालन हुन सकोस्।
यसका साथै, कम प्राविधिक जानकारी भएका प्रयोगकर्ताहरूले यी सबै कार्यहरूका लागि एप डाउनलोड गर्छन्, जसले यो कार्य स्वचालित रूपमा गर्दछ। यद्यपि, धेरै नि: शुल्क एपहरू प्रयोग गर्दा, प्रयोगकर्ताले तिनीहरूका लुकेका र भित्री फिचरहरू थाहा पाउँदैनन्। त्यसैले यी एपहरूले प्रयोगकर्ताको डाटा ट्र्याक गर्छन् र व्यक्तिगत जानकारी सङ्कलन गर्छन्।
धेरै प्राइभेसी त्रुटिहरू फेला
साइबरन्यूजले यी एपहरूलाई १०० मध्ये सुरक्षा स्कोर दिएको छ। शोधकर्ताहरुका अनुसार १३ ओटा एपमा धेरै प्रकारका प्राइभेसी गल्तीहरु भेटिएका छन् । एकै समयमा, त्यहाँ ६ एपहरू थिए जसमा धेरै प्रकारका गडबडिसहितका लिङ्कहरू थिए।
एन्टिभाइरस एप किप क्लिन क्लिनर (Keep Clean Cleaner) सुरक्षाका लागि १०० मध्ये ५४ अंकका साथ सबैभन्दा खराब एपको सूचीमा शीर्ष स्थानमा छ। अर्कोतर्फ सेफ सेक्युरिटी (Safe Security) र फोन क्लिनर (Phone Cleaner) एप्सले १०० मध्ये ९ अंक पाएका छन् ।
साइबरन्यूजले आफ्नो ब्लगमा यसमध्ये ४० एपहरु धेरै प्रकारका ट्र्याकरहरुले सुसज्जित रहेको बताएको छ। यी ट्र्याकरहरू मार्फत, एप विकासकर्ताहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई ट्र्याक गर्न र उनीहरूको व्यक्तिगत जानकारी सङ्कलन गर्न सक्छन्, जुन मनिटाइजेसनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
प्रकाशित: २५ बैशाख २०७९, आईतवार
एन्ड्रोयडका लागि माइक्रोसफ्टको वर्ड, एक्सेल र पावरप्वाइन्ट एप्स
‘बैदेशिक रोजगार’ मोबाइल एप शुरु, बैदेशिक रोजगार सम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारी दिने
बजारमा ठगिए मोबाइल एपबाट सिधै सरकारलाई गुनासो गर्नुस्, भिडियो पनि पठाउन सकिने
फेसबुकले ब्रेकिंग न्यूज एप ल्याउन सक्ने
माइक्रोसफ्ट स्टोरमा एप्पल आइट्यून्स उपलब्ध, निशुल्क डाउनलोडको सुविधा
भारतले ह्वाट्सएपको सेक्यूरिटी अडिट गर्ने योजना गर्दै,